ချက်ပြုတ်ရာမှာ ... | လူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Topic: ချက်ပြုတ်နေတယ် ...
ငါနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းနှင့်တကွ, ပေါင်မုန့်စက်အတွက်ပေါင်မုန့်အခြောက်အမရတဆေးကိုမဖုတ်နိုင်သလား? ဘယ်လိုအသုတ် upload သလော
မုန့်ပြုလုပ်သောမုန့်ပြုလုပ်သောမုန့်တွင်ခြောက်သွေ့သောတဆေးဖြင့်မဟုတ်ဘဲသာမန်တဆေးဖြင့်မုန့်ဖုတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သလော။ သုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ ၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ရုံသာမကလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောအောက်ပါစာရွက်ကိုအသုံးပြုသည်။
အရိုးရှင်းဆုံးကြက်သားဟင်းချိုကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲ။ ကြက်တစ်ကောင်ကိုတစ်နာရီလောက်ချက်ပြုတ်ပါ။ ဟင်းရည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်ရံဖန်ရံခါအမြှုပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ ကြက်သားများကိုထုတ်ဖယ်ထုတ်ပါ။ သေးငယ်သောအသားခုတ်ပါ။ ကြော် 1
Pollock ကိုဘယ်လိုကြော်ရမလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအခွံခွာပြီးအပိုင်းပိုင်းဖြတ်၊ ကောင်းပြီဆား။ ငါဒါလုပ်တယ်၊ အခွံ၊
မီးဖိုချောင်သုံးမပါဘဲဘယ်လိုလုပ်မလဲ အေးအေးဆေးဆေးစားသုံးရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ) မီးပေါ်မှာထည့်ပြီးလျှင်၊ ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားလော့။
မေးခွန်းကတစ်ခွက်ထဲမှာဂရမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ နောက်ဆုံးတော့ခွက် 200 ဂရမ်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ငါဒီလို "ဒီကုဒ်ဒါ" ကိုအမြဲတမ်းသုံးတယ်။ 1/4 cup 60ml 1/3 cup 75ml 1/2 cup ...
prompt ပြုတ်အာလူးရိုးရှင်းသောသုပ် retseptik ???
ငါ့ကိုပြုတ်အာလူးသုပ်များအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်ကိုပြောပြပါ ??? အသားပြုတ်အာလူးကိုနှိပ်စက်ပါ၊ ချဉ်သောသခွားသီးများကိုထည့်ပါ။ roller နှင့်အတူပန်းကန်လုံးကိုတင်, လတ်ဆတ်သောသခွားသီး၏ချပ်နှင့်အတူ mayonnaise နှင့်အပါအနှင့်အတူဖြီး ...
ဘယ်လောက်ကြာကြာ "ချက်ပြုတ်သည်အထိ" ဘယ်လောက်ခေါက်ဆွဲကိုချက်ပြုတ်ဖို့မိနစ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? အထုပ်မပြော, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရှိသေး၏
ဘယ်လောက်ကြာကြာ "ချက်ပြုတ်သည်အထိ" ဘယ်လောက်ခေါက်ဆွဲကိုချက်ပြုတ်ဖို့မိနစ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? ၎င်းသည်အထုပ်ပေါ်တွင်ရေးသားထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ခေါက်ဆွဲ၏အထူပေါ် မူတည်၍ ၃ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
အာလူးကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကြော်ရမလဲ။ နေကြာဆီနှင့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအဖုံးကိုပိတ်ပါ။ တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့အလျင်အမြန်)) ဒါကြောင့်အသားနဲ့တူ, ဟုတ်တယ် ... ပထမ ဦး ဆုံးအာလူးကြော်ပြီးတော့ထိပ်ပေါ်မှာ ...
အအေးနှင့်ပူသောဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ကွာခြားချက်ကားအဘယ်နည်း။ အပူချိန်နှင့်ကြာချိန် different ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်အခြေအနေများတွင်ဆေးလိပ်အသားထုတ်ကုန်များ - ၁၈၂၀ စင်တီဂရိတ်အအေးခံခြင်း၊ 1820Сပူပြင်းတဲ့ဆေးလိပ်သောက်; 3550C မီးခိုးထဲမှာဖုတ်။ ပထမကိုအဓိကအသုံးပြုကြသည် ...
တစ်ဦး Blender အတွက်အချိုပွဲဒိန်ခဲ, prompt ကို retseptik
ရောစပ်ထားတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲအချိုပွဲ, ငါ့ကိုစာရွက်ပြောပြပါ ဦး ။ ကျွန်တော် ၂၀၀ ဂရမ်ကိုတုံးတယ်။ ၀.၅% နို့မှုန့် (၁၅၀) နှင့်အဆီနည်းသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်ချောကလက်ပရိုတိန်း၏လက်ဖက်ရည်အနည်းငယ်။ ဒါဟာအိပ်ရာမဝင်မီရေစာအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကယ်လိုရီနည်းသောပရိုတင်းကော့တေးဖြစ်သည်။
သံချေးရှိမရှိ? ဝယ်မနေ့ကအိုးကင်း, ချက်ပြုတ် pilaf ။ အခုတော့သံချေး၏နံရံပေါ်မှာ။ ဒါဟာသံအိုးကင်းများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သနည်း
သံချေးကိုသံချပါသလား မနေ့ကငါအိုးတစ်လုံးဝယ်ပြီး၊ ယခုတွင်နံရံတွင်သံချေးရှိသည်။ ၎င်းသည်သံအိုးတစ်အိုးအတွက်ပုံမှန်လား။ သတ္တုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းပညာကိုချိုးဖောက်လျှင်စကေးပေါ်လာပါကမည်သည့်အရာမျှအထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။ ငါတို့သွားဖို့ကြိုးစားရမယ် ...
သူတို့ကမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာအရသာရှိတဲ့အာလူးတွေလို့ပြောကြတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ငါတို့ပြုဘူးသည်မဟုတ်။ ငါတို့မှာကင်ကင်နဲ့မီးဖိုရှိတယ် combi mode ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ microwave (နှင့်အတူ ...
ဥဘယ်လောက်ကြာကြာချက်ပြုတ်ဖို့လိုသလဲ ???? ပြိုကွဲသွားရင်သူတို့ကိုငါရေနွေးအိုးထဲထည့်လိုက်ပြီးဆူနေပြီဆိုရင် ၁၀ မိနစ်လုံးလုံးပြုတ်ပါ။ (ပြုတ်ရည်ပြင်းတာကိုသင်ဟာလူသစ်ဘွဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်)) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အသားပြုတ်ပါ ...
ပြည်သူ့! အဘယ်သူသည် Pickled နှင့်အတူ pies များအတွက်စာရွက်ရှိသနည်း ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပေးပါ!
လူများတို့၊ အဘယ်သူသည်ချဉ်ပိုင်စာရွက်ရှိသနည်း ကျေးဇူးပြုပြီးမျှဝေပါ သူမအသက်တာတလျှောက်အစာရှောင်နေစဉ်အတွင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူ pies များကိုထမင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်။
ရေနွေးငွေ့မသုံးဘဲငါးကိုဘယ်လိုရေနွေးငွေ့သုံးရမလဲ ?? တစ်ပြီနောက်ဟင်းယူပါ။ ရေအနည်းငယ်ကိုထည့်ပါ၊ သေးငယ်တဲ့ဒယ်အိုးထဲထည့်ပြီးရေအနည်းငယ်ကိုလောင်းကာဒယ်ထဲသေးသေးလေးထဲကိုထည့်ပါ။
အိမ်မှာနေတဲ့စာရွက်အမြန်အစားအစာထားသည်ကိုတွေ့အကြံပြုပေးပါ။ Thank you!
အိမ်တွင်အမြန်ဆုံးချက်ပြုတ်ရန်အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းကိုအကြံပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တောင်းဆိုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "Bohemian Pheasant" နည်းစနစ်သင်လိုအပ်သည်မှာ - - pheasant - 1 pc ။ - ဘေကွန် - ၅၀ ဂ - ထောပတ်သို့မဟုတ်အဆီ ...
မီးဖို၌ရှိသောမုန့်မှခြောက်သွေ့သော crackers များကိုမည်သို့ကောင်းကောင်းစားနိုင်မည်နည်း။ ဆီနဲ့ရောပြီးဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းနဲ့ဖြန်းပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုညှစ်ပြီးသွားပါ။ ကျွန်တော်ဖြတ်ခဲ့တယ် ...
မီးဖိုချောင်တစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့မသွားအောင်ငါးတွေကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းရမလဲ။ သင်ရေပူထဲတွင်နှစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှလကာရည်ဖြင့်ရေအေးတွင်ကိုင်ထားလျှင်ငါးများသည်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အမှားတွေကပိုကောင်းတယ် ...
ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို multivarka အတွက်မှိုဟင်းချို?
ချက်ပြုတ်နည်းနှေးသောချက်ပြုတ်စက်မှမှိုဟင်းချို? ငါနှေးနှေးသောမီးဖိုချောင်သုံး၌မှိုဟင်းချိုကိုချက်ပြုတ်လိုသည်။ Redmond သည်အလွန်အရသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရွက်တွင်ချက်ပြုတ်သည်။ ...
အဘယ်အရာကို Roach ထံမှချက်ပြုတ်ဖို့?
Roach မှဘာချက်ပြုတ်ရမလဲ။ Roach ချစ်ပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများ - မည်သည့်ပမာဏတွင်မဆို Roach၊ အရသာအတွက်ဆား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ ကြက်ဥ။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခု ဤနည်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောအသားကင်ကိုစားနိုင်သည်။
81 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,928 စက္ကန့်ကျော် Generate ။